Convex Lenses - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Convex Lenses)
Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex Lenses yakagadzirirwa kutarisisa kana kuenzanisira kunyorera mukati mekati uye wavewa infrared spectrum. Magadzirirwo: Chinyorwa: ZnSe (Zinc Dlenide) Dhizaini Wavelength: 10.6um Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm...
Germanium Plano-Convex Lenses ndeyechokwadi kune akasiyana maficha infrared, kusanganisira yekupisa imaging, infrared spectroscopy, uye kure sensing. Magadzirirwo: Chinyorwa: Germanium (Ge) Dhizaini Wavelength: 10.6um Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm...
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-SF1 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba...
Muenzaniso Nha.: RP-FSDCL
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Mashoko: Yakabatanidzwa Silica Dhayamita: 12mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm...
Convex Lenses Convex Lens Concave Lens Kaviri Convex Lenses Plano Convex Lense ZnSe Lenses Plano Convex Lens Plano Concave Lenses